Jaaliyadda Soomaaliyeed Magaalada Durban ee K/Afrika iyo Mas’uulin kasocotay Safaaradda Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Durban. - Idman news
Jaaliyadda Soomaaliyeed Magaalada Durban ee K/Afrika iyo Mas’uulin kasocotay Safaaradda Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Durban.
Mas’uulinta Safaaradda oo uu hogaaminayo Danjiraha oo ay wehliyaan Uqeybsanayaasha Ganacsiga iyo Waxbarashada ayaa socdaal ku tagay magaalada Durban,waxeyna kulamo la qaateen qaar ka mid ah Jaaliyadda Soomaalida.
Kulankan ayaa kasoo qeybgalay Ganacsato,Waxgarad,Aqoonyihanno iyo Arday waxa ka barata Jaamacadaha Gobolkaas,ayaa si weyn u soo dhaweysay Mas’uulinta waxa ayna ka codsadeen in ay Safaaraddu ka warqabto ganacsatada Gobolka KZN oo ah ka mid ah Gobolada ganacsatada Soomaalida boobka loogu geysto.
Uqeybsanayaasha Ganacsiga iyo Waxbarashada,Abdirahman Maxamed Xaaji Xasan iyo Cabdi Xalane Xirsi ayaa sheegay inuu safarkooda la xiriiro ka warqabka Jaaliyadda qaar ka mid ah Gobolada Soomaalidu u badantahay,waxaana horay ay Mas’uulintan safaro noocani ku tageen qaar ka mid ah Gobolada Soomaalida u badantahay ee K/Afrika.
Danjire Maxamed Cali Mire ( Nabadoon ) ayaa sheegay in safarkooda la xiriiro ka warqabka Jaaliyadda Durban iyo wacyagalinta dilalka oo bata xilliyada sanad dhamaadka iyo waliba sidii adeegga Safaaradda loo gaarsiin lahaa Gobolka KZN.
WD:C/qaadir Axad Dhaqane,Durban
Previous Ra’iisul Wasaare Rooble oo Golaha Ammaanka QM uga warbixiyay xaaladda Soomaaliya.
Next Ciidanka Puntland oo u gurmaday dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Boosaaso kuwaas oo ay saameeyeen roobab ku hooray magalaada